ဒီလိုအစားသောက်တွေက သင့်အတွက်အသက်ရှည်ဆေးဆိုတာ သိပြီးပြီလား? – Trend.com.mm
ဒီလိုအစားသောက်တွေက သင့်အတွက်အသက်ရှည်ဆေးဆိုတာ သိပြီးပြီလား?
Posted on July 28, 2019 July 22, 2019 by Shun Lei Phyo
သေချိန်တယ်သေရမယ်ဆိုတာလည်း မမှားပင်မဲ့ လူတွေဟာ နေ့စဉ်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက် အစားအစာစားသုံးတဲ့အခါ မှာ အသက်သက်ရှည်ရှည်နေန်ိင်ဖို့ဘယ်အရာတွေကို မှန်မှန်စားပေးသင့်သလဲ…
ကြက်ဥမှာလိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာသန်းစွမ်းစေပြီး ဖွံ့ဖြိုးလှပစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြက်ဥ ကို စားသုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။
နို့၊ ဒိန်ချဉ် စတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားစားမျိုးကို အနည်းဆုံး တစ်ပတ်တစ်ခါ လောက်တော့စားပေးသင့်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်က bodyအတွက် အလိုအသုံးဝင်တဲ့ အာဟာရမို့လို့ပါ။
အသားထက်ငါးကို ပို စားတဲ့သူဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေရတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းအသက်ရှည်ချင်ရင် ခေါင်းတစ်ရာသားကိုစားပါလို့မြန်မာပုံပြင်တစ်ခုမှာလည်းပါခဲ့ဖူးပါတယ်။ ငါးမှာပါတဲ့ omega3ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အဆီဓာတ်ကို ပေးနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
စပျစ်သီးမှာ antioxidantsပါဝင်တာကြောင့် ကင်ဆာဆဲလ်လို အရာများကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ အနီရောင်စပျစ်သီးတွေဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်လို့လူတွေဟာဝိုင်အနေနဲ့ချက်သောက်ကြပြီး စပျစ်ဝိုင်ဟာ မျက်လုံးနဲ့သွေးပေါင်ချိန်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
အသက်ရှည်ရှည်နေကြရစေဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ အစားစာတစ်ချို့ကိုစုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်…
သခြေိနျတယျသရေမယျဆိုတာလညျး မမှားပငျမဲ့ လူတှဟော နစေ့ဉျအသကျရှငျနထေိုငျဖို့အတှကျ အစားအစာစားသုံးတဲ့အခါ မှာ အသကျသကျရှညျရှညျနနျေိငျဖို့ဘယျအရာတှကေို မှနျမှနျစားပေးသငျ့သလဲ…
ကကျဥမှာလိုအပျတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျကို ကနျြးမာသနျးစှမျးစပွေီး ဖှံ့ဖွိုးလှပစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ကွကျဥ ကို စားသုံးပေးဖို့လိုပါတယျ။
နို့၊ ဒိနျခဉျြ စတဲ့ ပိုတကျဆီယမျ ကွှယျဝတဲ့ အစားစားမြိုးကို အနညျးဆုံး တဈပတျတဈခါ လောကျတော့စားပေးသငျ့ပါတယျ။ ပိုတကျဆီယမျဓာတျက bodyအတှကျ အလိုအသုံးဝငျတဲ့ အာဟာရမို့လို့ပါ။
အသားထကျငါးကို ပို စားတဲ့သူဟာ အသကျရှညျရှညျနရေတယျလို့ကွားဖူးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျးအသကျရှညျခငျြရငျ ခေါငျးတဈရာသားကိုစားပါလို့မွနျမာပုံပွငျတဈခုမှာလညျးပါခဲ့ဖူးပါတယျ။ ငါးမှာပါတဲ့ omega3ဟာ ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့ အဆီဓာတျကို ပေးနျိုငျပွီး နှလုံးရောဂါကို ကာကှယျပေးနျိုငျတယျလို့သိရပါတယျ။
စပဈြသီးမှာ antioxidantsပါဝငျတာကွောငျ့ ကငျဆာဆဲလျလို အရာမြားကို တှနျးလှနျနျိုငျပါတယျ။ အနီရောငျစပဈြသီးတှဆေိုရငျ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျလို့လူတှဟောဝိုငျအနေနေဲ့ခကျြသောကျကွပွီး စပဈြဝိုငျဟာ မကျြလုံးနဲ့သှေးပေါငျခြိနျအတှကျအကြိုးရှိတယျလို့သိရပါတယျ။
အသကျရှညျရှညျနကွေရစဖေို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျအတှကျလိုအပျတဲ့ အစားစာတဈခြို့ကိုစုစညျးတငျပွလိုကျပါတယျ..
ကိုယ်ပိုင် Youtube Channel တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသား Park Seo Joon